Maalinta: Febraayo 2, 2019
Metro Istanbul AS, oo ka shaqeysa nidaamyada tareenka ee Istanbul, waxay codsatay qiimo dhimis saamiga kirada ee 15 oo ay siisay IMM. Gawaarida 'Metro İstanbul A.Ş' waxaa lagu kireynayaa xariiqyo T1, T3, T4 iyo M6. [More ...]
Duqa magaalada Küçükçekmece Temel Karadeniz ayaa sheegay in Küçükçekmece ay noqon doonto saldhig gaadiid mustaqbalka. Halkan waxaa ah faahfaahinta oo dhan… Duqa magaalada Küçükçekmece Temel Karadeniz, oo sharraxaya himilooyinka muddada cusub, ayaa sheegay in Küçükçekmece uu noqon doono saldhigga gaadiidka. [More ...]
Talyaani Astaldi wuxuu galay isbadal dhaqaale sababtoo ah Yavuz Sultan Selim Bridge boqolkiiba saamiga 33 ee wadaxaajoodka iibka kooxda Shiineysku waxay kuxirantahay hagaajinta heerka sarrifka. Buundada Yavuz Sultan Selim oo ay weheliso shirkadda Astaldi [More ...]
Kusimaha madaxweynaha gobolka Tekirdag Aziz Yildirim, degmada Suleymanpasa ee gobolka; Dekedaha jira, kaabayaasha gaadiidka, warshadaha iyo saadka ayaa ah kuwo si hufan oo wax ku ool ah u adeegsanaya gobolka iyo dhaqaalaha dalkeenna si loogu oggolaado horumarinta saadka [More ...]
2. Imtixaanka 20-22 ee bisha Febraayo
Waxaa soo abaabulay Fethiye Rugta Ganacsiga waxaana loo qaban doonaa imtixaanada seddexaad ee Imtixaanada Aqoonta Gawaarida Gawaarida. Iyada oo masuuliyiinta shirkadda ay ku hawlanaayeen ganacsiga gawaarida gacanta labaad [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın 29 Janaayo 2019 Talaadada, gudahood baaxadda Mashruuca Xawaaraha Sare ee Konya-Karaman; Goobaha dhismaha Ereğli iyo Çumra, Saldhigga Karaman iyo saldhigga Yaanada [More ...]
Akcaray Lambarka Gawaarida waa sii kordhaya
1 August Akçaray, oo ay adeegsan jireen dadka Kocaeli ee wata taraafikada 2017 tan iyo 12, waxay sii wadeysaa inay kordhiso tirada gawaarida. Akçaray, oo ay isticmaaleen una jeclaayeen dadka reer Kocaeli muddo gaaban gudaheed, [More ...]
Tartanka Cambarka ayaa lagu soo bandhigay EMITT
Çambaşı Plateau, oo ah kan ugu jecel dalxiiska jiilaalka, waa midka ugu weyn adduunka ee '4'. Bandhigga Dalxiiska oo ka mid ah “EMİTT-Bari Dalxiiska Caalamiga ah ee Dalxiiska iyo Tan Fairtıl Fair safarka ayaa la soo bandhigay. Shirkadda 94 ee ka socota 1100 [More ...]
Ardayda dhamaysay Kooraska Ski ee Erzincan waxay heleen shahaadooyinkooda
Degmada Erzincan waxay u furtay koorso baraf ah iyo baraf barafka loogu tala galay caruurta da 'da' 10-17 inta lagu gudajiray simistarka halku dhigga ah "Kaalay, Caruurta ilaa Ergan Mountain Erz. Koorsooyinka laga soo bilaabo heerka gelitaanka waxaa la bixiyay maalmaha shaqada. Gaadiidka ardayda, baahiyada nafaqada [More ...]
Qorshaha Miisaaniyadda Dalxiiska ee Bursa
EMITT, oo ah mid ka mid ah afarta dalxiis ee ugu waa weyn adduunka, ayaa isu keenay wax ka badan xarumo 94 iyo ururo ka kala yimid dalalka 5000 iyo boqolaal xarumaha dalxiiska ee Istanbul. Bursa Eskişehir Bilecik Agency Agency (BEBKA) Bursa Metropolitan [More ...]
Tababaraha taraafikada ee wadayaasha basaska ee Kayseri Veridi
Kayseri Agaasinka Amniga ee Waaxda Gaadiidka Gaadiidka waaxda dadweynaha iyo Gaadiidka A.Ş. Seminarka tababarka taraafikada ayaa loo habeeyay darawalada. Gaadiidka Kayseri Inc. Ka sokow darawalada basaska, tababarka [More ...]
Goobta Konyaalti Barafka, Furan Hisarçandır Road Furan
Dowladda hoose ee Antalya waxay furaysaa wadada barafka leh ee xaafada Hisarçandır ee Dagmada Konyaaltı. Kooxuhu waxay la halgamayaan lakabka barafka oo gaaraya mitirka 1 mitir meelo ka mid ah gobolka. Dowladda Hoose ee Magaalada, Antalya, oo wax ku ool ah maalmihii ugu dambeeyay [More ...]
Dagaal culus oo leh Guga Jiilaalka ee Izmir
Magaalada Izmir, gaar ahaan qabowga iyo barafka awgooda ayaa weli saameyn ku leh qeybaha sare ee kooxaha Degmooyinka Waaweyn si adag ayey ula tacaalayaan. Kooxo ka shaqeeya saacadaha 24 si ay wadada 'şdemiş Bozdağ u furnaato, [More ...]